samedi, 22 février 2020 23:04
Volley – Tompondakan’ny faritra faha-7: Norombahan’ny Tampon Gecko Volley sy ny Quatre Borne ny anaram-boninahitra
Lavo teo amin’ny lalao famaranana ireo solontena malagasy teo amin’ny sokajy lehilahy sy vehivavy tamin’ny andiany faha-26 amin’ny fiadiana ny tompondakan’ny faritra faha-7 isan-tarika natao androany. Teo amin’ny sokajy lehilahy dia resin’ny Tampon Gecko Volley avy atsy La Réunion tamin’ny seta 3 noho 2 ny ekipan’ny Zandarimariam-pirenena na GNVB Madagascar teo amin’ny famaranana. Teo amin’ny sokajy vehivavy indray dia voahosotra ho tompon-daka ny Quatre Borne avy atsy Maorisy rehefa nanamontsana ny Stef'Auto Madagascar tamin’ny seta 3 noho 0. (Jereo Sary Tohiny)
samedi, 22 février 2020 22:39
Faneva Ima: Nanoro hevitra sy nanome fanampiana an’ireo mpilalaon’ny Barea U20
Hiatrika lalao fahatelo amin’ny fifaninanam-bondrona ny Barea U20 mandray anjara amin’ny fifaninanana iraisam-pirenena « Coupe Arabe U20 » atao any Arabia Saodita. Hifanandrina amin’i Maroc i Madagasikara rahampitso alahady 23 febroary hariva. Mila mibata fandresena mazava ny Barea U20 mba hanohizany ny dia amin’ity fifaninanana ity. Omaly dia tonga tao amin’ny Holiday Inn Riyadh, hotely ipetrahan’ny Barea U20 nanoro hevitra azy ireo i Faneva Ima, kapitenin’ny Barea zoky teo aloha, niaraka tamin’ny vady aman-janany, sady nanolotra fanampiana ara-bola ho an’ireo tanora mandrafitra ny Barea U20. Mila ravinahitra any Arabia Saodita i Faneva Ima, milalao ao amin’ny Al Faiyah, klioba diviziona voalohany any Arabia Saodita. (Jereo Sary Tohiny)
Nafana ny adihevitra nihidy aman-trano tao amin'ny efitra malalaky ny foibem-paritry ny rano eto Sambava Centre, omaly Alakamisy, raha namory ireo mpitarika klioba baolina kitra ato amin'ny Faritra SAVA ny ligim-paritry ny baolina kitra. Raha hitady vahaolana mba hanatsarana ny baolina kitra aty SAVA ny lahadinika dia tsy nisy tapaka afa-tsy ny hoe : « Ravao tanteraka ny ligy fa tsy misy ny ilàna azy intsony », hoy ireo mpivory. Nanambara ny avy amin'ny klioba « Jaolahin’ny Iharana » Vohémar fa tsy handray anjara amin’ny fiadiana ny tompondakan’ny SAVA raha tsy rava ny ligy ka miova olom-baovao. Nanamafy izany koa ny avy amin'ny Alliance Andapa. (Jereo Sary Tohiny)
Sary: Fédération Malagasy de Natation
Nandrombaka medaly volamena ary voahosotra ho tompondakan'i Afrika Faritra faha- IV amin’ny taranja lomano teo amin’ny halavirana 100m mitsilany i Tendrinavalona Idealy, omaly, tamin’ny fifaninanana natrehiny tao Gaborone-Botswana. Miisa efatra ny mpilomano malagasy miaro ny voninahi-pirenena amin’ity fifaninana afrikanina atao any Gaborone (Botswana) dia i Tendrinavalona Idealy, Rabejaona Oly Antsa, Rakotomavo Jhon ary Andrianirina Lalanomena Anthony.
jeudi, 20 février 2020 20:53
Kitra – « Coupe Arabe U20 »: Madagasikara 4 # 5 Barheïn
Niondrika tamin’ny isa 4 noho 5 i Madagasikara nanoloana an’i Barheïn androany tamin’ny lalao faharoa natrehiny amin’ny fifaninanana iraisam-pirenena « Coupe Arabe U20 » tanterahina any Arabia Saodita ny 17 febroary ka hatramin’ny 5 martsa 2020. I Bahreïn no nisantatra ny fampidiram-baolina tamin’ity lalao ity. Nitarika 2 noho 0 izy ireo, vao nifoha ny Malagasy, ary nahavita nanao sahala 2 noho 2. 3 noho 2 ny isa nentin’ny ekipa roa tonta niala sasatra, nanantombo i Bahreïn. Nahavita nampitsibadika ny isa ny Barea ka nitarika 4 noho 3 teo amin’ny minitra faha-59, taorian’ny matin’i Raicardo. Nanararaotra ny lesoka tao amin’ny mpiandry harato Malagasy ry zareo Bahreïn ka nahatafiditra baolina roa tao anatin’ny 8 minitra. 5 noho 4 ny isa teo amin’ny minitra faha-67, nanatombo i Bahreïn, io koa no isa nisarahan’ny roa tonta.
Kitra-Coupe Arabo U20: Hifanandrina i Madagasikara sy Barhein anio
Hiatrika ny lalaony faharoa amin’ny fifaninanana iraisam-pirenena « Coupe Arabo U20 » atao any Arabia Saodita i Madagasikara anio. Hifanandrina amin’i Barhein ny ekipam-pirenena malagasy amin’ny baolina kitra latsaky ny 20 taona, anio amin’ny 6ora hariva, ora eto Madagasikara. Nandresy an’i Djibouti tamin’ny isa 4 noho 3 i Madagasikara tamin’ny lalao voalohany natrehiny ny alatsinainy lasa teo.
mardi, 18 février 2020 22:06
Kianjan'Alarobia: Hifarimbona amin’ny fanarenana ny Ministeran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena sy ny Tanànan'Antananarivo
Hisy fanamboarana hatao amin'ny Kianjan'Alarobia, izay hany kianja nahazo fankatoavana iraisam-pirenana afaka mandray fifaninanana amin'ny taranja atletisma raha eto Madagasikara. Hifarimbona amin’ny fanatanterahana izany ny Minisiteran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena sy ny Tanànan'Antananarivo Renivohitra. Nidina teny an-toerana nijery ifotony ny zava-misy sy namaritra ny asa maika hatao, ny Minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, Tinoka Roberto, androany 18 febroary 2020. Nanome baiko ny Minisitra ny tsy maintsy hanamboarana ka hamitana ny toerana fibatana fonjamby amin'ny faran'ny volana Martsa ho avy ity. (Jereo Sary Tohiny)
Nibata fandresena voalohany ny Barea tamin’ny lalao atrehany amin’ny « Coupe Arabe U20 » any Arabia Saodida. Nandresy an’isa 4 noho 3 i Madagasikara androany nanoloana an’i Djibouti, tamin’ny lalao natao tao amin’ny kianja Al Riyad. Efa nitarika tamin’ny isa 4 noho 2 ny Barea tamin’ny fihodinana voalohany. Mpilalao mendrika tamin’ity lalao androany ity i Todisoa Rafizy André (N°6). Fihaonana amin’i Bahrein ny lalao manaraka hatrehin’i Madagasikara ny alakamisy 20 febroary izao amin’ny 6 ora hariva. (Jereo Sary Tohiny)
Sary: Malagasy Rugby
Nindaosin’ny fahafatesana teo amin’ny faha-22 taonany, ny 16 febroary 2020 teto Antananarivo, i Rajomaharo Nirina Rarivoson, fantatra tamin’ny solon’anarana hoe Doda Be teo amin’ny tontolon’ny baolina lavalava. Tao amin’ny klioba Ankoay no nanombohany nilalao, avy eo nifindra tao amin’ny USA Ankadifotsy. Isan’ireo mpilalao nandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy latsaky ny 19 taona na XV Makis U19, andiany 2016, i Doda Be.